Somalia online: Qowmiyadda Oromada Oo Gummaad Hoose Ku Heysa Shacabka Reer Salaxaad
Qowmiyadda Oromada Oo Gummaad Hoose Ku Heysa Shacabka Reer Salaxaad
Salaxaad, 17-Nov-2009 - Shacabka degmada Salaxaad ayaa ka cabanaya gummaad hoose oo ay ku heyso qowmiyadda Oromada oo xuduud la wadaagta qowmiyadda Deegaanka Ismaamulka Soomaalida, iyadoo aynan jirin masuuliyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed oo arrintan ka hadlaya.
Dad badan oo ka tirsan shacabka reer Salaxaad oo xiriiro la soo sameeyey warsidaha Wabishabeele, ayaa cabasho ba'an ka muujiyey falalka laynta iyo xoolo boobka isugu jira ee ay qowmiyadda Oromadu ka wado tuulooyinka hoostaga degmada Salaxaad ee gobolka Fiq ee Deegaanka Ismaamulka Soomaalida.
Bishii tagtay ayey Oromadu weeraro is-daba joog ah ku soo qaadeen tuulooyin ka tirsan degmada Salaxaad, halkaas oo ay ku laayeen dad aad u fara badan, kuna qaadeen xoolo kor u dhaafaya 1000 neef.
Dadkii la soo xiriiray Wabishabeele ayaa niyad xumo ka muujiyey jawaab la'aanta masuuliyiinta iyo waxgaradka Deegaanka Ismaamulka Soomaalida ee ku wajahan arrintan.
Illaa hadda majirto wax dhaqdhaqaaq xal raadis ah oo laga sameeyey gummaadka hoose ee ay qowmiyadda Oromadu ku heyso shacabka reer Salaxaad.